News Collection: निर्माता निर्देशकले मलाई फसाए
निर्माता निर्देशकले मलाई फसाए
बिनिता बराल, नायिका
सहरमा यतिबेला तपार्इंको चर्चा चुलिएको छ नि?
–यसमा मेरो के दोष? त्यो मैले क्रियट गरेको होइन्, आफैं बनाइन्छ। मलाई थाहा नै हुँदैन। आजकल त त्यस्ता 'गसिप'लाई 'सिरियस' रूपमा लिन छाडिसकेँ, आउँछ/जान्छ। यस्ता कुरामा अल्भि्कएर 'करिअर' र व्यक्तिगत जीवन बर्बाद गर्न चाहन्न। बरु, जति 'गसिप' आओस्, 'ट्याकल' गर्न तयार छु।
चलचित्र चपली हाइटमा 'टपलेस सिन' दिनुभएको रहेछ, चर्चा त हुने नै भो नि हैन र?
–तपाईंलाई भनिहालुँ, चपली हाइटमा 'टपलेस सिन' नै छैन। पोस्टरमा मात्र 'टपलेस' देखिएको हो। त्यसमा पनि 'क्लियर' गर्न चाहन्छु कि मेरो पूरा शरीर ढाकेर फोटो खिचिएको थियो। पछि त्यो फोटोसपबाट 'टच' गरिएको हो। निर्देशक र निर्माताले 'चिप पब्लिसिटी' गर्न खोज्नुभएको हो। जुन हिसाबले 'पब्लिसिटी' गर्ने भनिएको थियो, त्यसो गरिएन्।
तपाईं त्यो पोष्टरप्रति सहमत हुनुहुन्छ?
–पटक्कै छैन। त्यो पोष्टर बाहिर ल्याउनु अघि मलाई देखाइएको थिएन। पोष्टरका लागि 'फोटोसुट' गरेको मात्र भनिएको थियो।
त्यो सिन नभए पनि अन्य धेरै 'भल्गर' सिनहरू फिल्ममा भएको चर्चा छ नि?
–यो सब 'गसिप' मात्र हो। फिल्ममा कुनै 'भल्गर' दृश्य छैन्। तर, चपली हाइटको विषयवस्तु नै यौन मनोविज्ञान भएकाले केही 'बेडसिन'हरू भने छन्। स्त्रि्कप्टकै डिमान्डअनुसार फिल्म हेरिरहँदा दर्शकलाई कुनै अभाव नहोस् भनेर राखिएको हो। तर, मिडियामा आएजस्तो 'भल्गर' सिन फिल्ममा छैन।
'डर्टी ल्याङ्ग्वेज' बोलेको कुरा?
–त्यो सही हो। फिल्मको कथाअनुसार त्यो आवश्यक पनि छ। मैले धेरै ठाउँमा 'डर्टी ल्याङ्ग्वेज' बोलेको छु।
तपाईं त फिल्ममा बोल्ड सिन दिन मात्र होइन, अर्काको सम्बन्ध टुटाउन पनि खप्पीस हुनुहुन्छ भनिन्छ। सुदर्शन थापा र सुष्मा कार्कीबीचको तीन वर्षदेखिको सम्बन्ध 'बे्रक' गराइदिनु भयो रे नि!
–पहिलो कुरा त सुदर्शन थापा भन्ने मान्छेलाई म राम्रोसँग चिन्दै–चिन्दिन्। ऊ निर्देशक भन्ने चाहिँ थाहा छ। सुष्मा चाहिँ चिनिरहेको साथी हो। सुदर्शनले मलाई फोन गरेर डिष्टर्ब गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा मैले कसैलाई भनेको थिइनँ। तर, अति भएपछि सुष्मालाई 'तिम्राे ब्याइफ्रेन्डले मलाई फोन गर्छ सम्झाउँ' भनेर जानकारी गराएँ तर त्यही लफडा भयो। सुदर्शन र म हिँड्ने बाटो विलकुल फरक छ। ऊसँग काम गर्ने कुनै 'इन्ट्रेस्ट' छैन। भविष्यमा पनि उसँग काम गर्न लालायीत हुने छैन्। उसँग मेरो कहीँ कुनै प्रकारको सम्बन्ध पनि छैन। त्यसैले म उनीहरूबीचको सम्बन्धमा आएको भन्ने कुरा हुँदै होइन। उनीहरूको आफ्नै 'अन्डरस्ट्यान्डिङ'मा 'बे्रकअप' भयो भन्ने मैले पत्रिकाबाटै थाहा पाएकी हुँ।
कृषा चौलागाईंले फिल्मबाट हटाएको कुरा नि?
–यो चाहिँ सही हो। हामी फिल्मका लागि पूर्ण रूपमा तयार थियौं तर सुटिङ हुनुभन्दा एकहप्ता अगाडि मलाई हटाइयो। त्यसैले मैले भविष्यमा यस्ता 'ह्यारसमेन्ट'हरू नदोहोरियोस् भनेर मिडियालाई गुहारेको हुँ।
यही कुरालाई लिएर तपाईंले 'आत्महत्या गर्छु' भनेर धम्की दिनुभयो नि होइन?
–म फिल्ममा 'डेब्यु' हुन सात वर्षदेखि 'स्ट्रगल' गरिरहेकी थिएँ तर मेरो 'करिअर स्टार्ट' हुनु अगाडि नै 'मिसगाइड' भयो, 'मिसलिड' भयो। त्यही कुराले 'करिअर' नै खत्तम होलाजस्तो लाग्यो। जसले गर्दा म 'मेन्टल्ली डिस्टर्ब' भएँ र मलाई आत्महत्या गर्ने सोच आएको थियो।
'चपली हाइट'मा तपाईंको कस्तो भूमिका छ?
–मैले 'बिनि' भन्ने पात्रको भूमिका निर्वाह गरेको छु। फिल्मको हिरो नै 'बिनि' हो। कथा नै उसमाथि बगेको छ। ऊ निकै 'केयरफ्रि तथा बिन्दास टाइपकी छे। साथै, इनोसेन्ट र सेक्सी पनि। तर, एक्कासी एउटा घटनाले उसको होल लाइफ चेन्ज हुन्छ। फिल्ममा 'बिनि' एउटैले तीन पात्रको भूमिका निभाएकी छे।
यो फिल्म गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो?
पहिलो फिल्ममै मैले निकै 'इन्जोय' गरे। निर्माता, निर्देशकदेखि अन्य कलाकार सबै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। विशेषगरी 'को–स्टार' अमिर गौतम निकै 'प्रोफेसनल' र सहयोगी लाग्यो। मलाई लाग्छ, अमिरसँग मेरो 'अनस्त्रि्कन केमेस्ट्री' निकै जमेको छ।
नयाँ नायिकाहरूलाई निर्माता, निर्देशकबाट सेक्सको प्रस्ताव आउँछ रे, हो?
–अरूलाई के भयो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर, मैले कहिले पनि 'सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट' सहनुपरेको छैन।
तपाईं खुला सोचको देखिनुहुन्छ, प्रेम त पक्कै गर्नुभएको होला?
–साथीहरू त धेरै छन्, तर तपाईंले भनेजस्तो प्रेमी कोही छैनन्। 'आइ एम कम्प्टि्ली एलोन'।
प्रपोज त धेरै आउँछ होला नि?
–प्रपोज त अहिले मात्र होइन् स्कुल पढ्दा पनि निकै आउँथ्यो। 'तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु' भनेर डराइडराइ लभलेटर दिने धेरै थिए। रमाइलो पनि हुन्थ्यो तर आजकल परिपक्वखाले प्रस्ताव आउँछ। आफ्नै सर्कलबाट धेरै प्रस्ताव आइरहेको हुन्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कोही भेटेको छैन।
सेक्स के होजस्तो लाग्छ?
–'बायोलोजिकल निड'। त्यससँगै प्रकृतिले दिएको सुन्दर उपहार।
विवाह अगाडिको सेक्स उचित हुन्छ?
–सहमतिमा हुन्छ भने केही होइन। तर, भोलि विवाह गर्ने पक्का छैन भने सेक्सले समस्यामा पार्न सक्छ।
अबको पाँच वर्षमा बिनिता बराल उचाई कहाँ पुग्छ?
– पाँच होइन्, दुई वर्षभित्रै मैले नेपाली चलचित्रमा आफ्नो स्थानमा बनाइसकेकी हुन्छु।